2022 Doorashooyinkii: Taageerada hore ee musharaxiinta – SEIU Local 925
2022 Doorashooyinkii: Taageerada hore ee musharaxiinta
To read in English, click here; Para leer en espanol, haga clic aqui
SEIU 925 waxay ku faraxsantahay inay ku dhawaaqdo wareeggeedii kowaad ee taageerada musharaxiinta ee tartamada Washington 2022.
Riix halkan si aad u aragto liiska buuxa ee musharaxiinta la taageeray
Si loo kasbado taageerada SEIU 925, musharrixiintu waa inay dhammaystiraan xog-ururinta oo ay ula fadhiistaan waraysi xubnaha ka socda degaankooda. Musharixiinta waa in ay go’aansadaan in ay ku biiraan khad kooxda haddii loogu yeero, oo ay su’aalo ka weydiiyaan arrimaha u dhaxeeya nidaamka canshuuraha kala duwan ee Washington, arrimaha waxbarashada K-12, dhibaatada daryeelka carruurta ee ka jirta gobolkeenna, awood-u-helidda guryeynta, caddaaladda jinsiyadda, iyo in ka badan.
“Qoysaska ka shaqeeya Washington waxay mudan yihiin in codkooda la maqlo. Taasi waa sababta aan uga qaybqaato waraysiyada taageerada, oo aan hubiyo in musharraxiintu ay garanayaan arrimaheenna, “ayuu yidhi Jason Conant, Rinjiyeyaal Dayactirka Dugsiga Degmada Edmonds.
“Inta badan dadka Olympia waxay gaadhaan go’aan na saamaynaya iyaga oo aan aqoon shakhsina ama aanay nala tashanin,” ayuu yidhi Keith Allex, rinjiile ka tirsan Dugsiga Degmada Bellingham iyo xubin hore oo Guddiga Sare ah.
Si aad wax badan uga barato qaar ka mid ah murashaxiinta SEIU 925 la ansixiyay, sii wad akhriska:
Dave Paul oo ah Wakiilka Gobolka, Degmada 10aad (Whidbey Island, Camano, Mt Vernon) – votedavepaul.com
Kalfadhigii ugu dambeeyay ee sharci-dejinta, Rep. Paul wuxuu diiradda saaray maalgashiga bulshada, oo ay ku jiraan cusboonaysiinta nidaamka isgaarsiinta deg-degga ah ee Degmada Skagit, Nidaamka Maktabadda LaConner, iyo daryeelka carruurta iyo guryaha la awoodi karo ee Anacortes. Waxa uu gacan ka geystay bixinta 5.5% Kharashka Nolosha ee hagaajinta shaqaalaha waxbarashada dadweynaha, iyo ballaarinta helitaanka tababaro, Running Start, iyo barnaamijyada kale ee isku xira dadka shaqeeya fursado cusub. Tartanka Dave wuxuu noqon doonaa mid si cajiib ah loo tartamo sanadkan, waana ku faraxsanahay inaan taageerno dib u doorashada.
Emily Randall oo loogu talo galay Gobolka Senetka, Degmada 26aad (Gig Harbor, Port Orchard, Bremerton) – electemilyrandall.com
Emily Randall waxay si adag ula shaqeysay xubnaha SEIU intii lagu guda jiray kalfadhigii sharci dejinta iyo wixii ka dambeeyaba. Intii ay joogtay Olympia, waxay hogaamisay dadaal laba geesood ah si loo dhimo lacagaha laga qaado Buundada Tacoma Narrows Bridge, iyo ka dhigista kharashka daryeelka caafimaadka iyada oo hoos u dhigaysa qiimaha dawooyinka dhakhtarku qoray iyo in la xaddido kharashka insulinta. Emily hooyadeed waa barbaariye Dugsiga Sare ee South Kitsap, iyo 2020, waxay ka caawisay xubnaha gaadiidka South Kitsap inay helaan faa’iidooyinka shaqo la’aanta ee ay kasbadeen markii dugsiyadu ka falceliyeen masiibada COVID. Waan ku faraxsanahay inaan taageerno ololaheeda dib-u-doorashada!
Yasmin Trudeau oo u taagan Gobolka Senatka, Degmada 27aad (Tacoma) – peopleforyasmin.com
Sanadii ugu horeysay ee Senator Trudeau, waxay si adag uga shaqeysay arrimaha sinnaanta, oo ay ku jirto dibu habeynta sida shaqsiyaadka xiran loogu tiriyo tirakoobka, kordhinta luqadda ee dugsiyada, iyo ballaarinta helitaanka tababaro. Khibradda Trudeau ee xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee ka shaqaynta ilaalinta shaqaalaha guriga iyo arrimaha qabiilka ayaa ka dhigaya lamaane qiimo leh fadhiyada mustaqbalka, waana ku faraxsanahay inaan taageerno ololaheeda.
Dan Bronoske ee Wakiilka Gobolka, Degmada 28aad (Lakewood, University Place) – danbronoske.com
Dan Bronoske waa dab-demiska ururka shaqaalaha ee u adeega Degmada Pierce. Horraantii sanadkan, wuxuu ahaa kafaala-qaadka koowaad ee biilka mudnaanta SEIU 925 HB 1837. Sharcigan dareenka caadiga ah wuxuu yareynayaa dhaawacyada goobta shaqada ee ka-hortagga ah isagoo u oggolaanaya Shaqada iyo Warshadaha inay nidaamiyaan ergonomics. Xeerkani waxa uu ahaa mawduuca 9-saac ee Filibuster ee Golaha Jamhuuriga, oo si dirqi ah aan cod uga helin Guurtida. Bronoske waa horyaal u ah qoysaska shaqeeya, waanan ku faraxsanahay inaan taageerno ololihiisa dib-u-doorashada.
Claire Wilson oo ka tirsan Senatka Gobolka, Degmada 30aad (Federal Way) – claireforsenate.com
Claire Wilson waxa ay kafaala qaaday Xeerka Bilawga Carruurta ee caanka ah sanadka 2021, kaas oo ka dhigay kharashka kabka daryeelka ilmaha ee Washington heerka ugu wanaagsan qaranka. Sharcigan waxa kale oo uu balaadhiyey helida daryeelka ilmaha la awoodi karo ee kumanaan qoys oo gobolka oo dhan ah. Shaqadan nolosha beddeleysa, waxaan ku faraxsanahay inaanu taageerno dib-u-doorashada!
Kristine Reeves ee Wakiilka Gobolka, Degmada 30aad (Federal Way) – kristinereeves.com
Kristine Reeves waxay ahayd horyaalnimada daryeelka carruurta labadii xilli ee ugu horreeyay ee sharci-dejinta, hadda way sii socotaa shaqadaas. Waxay ka shaqeysay horumarinta dhaqaalaha, arrimaha halyeeyada, iyo helitaanka daryeelka carruurta, waxayna aaminsan tahay in guriyeynta la awoodi karo ay tahay dhibaatada ugu muhiimsan ee lagu xallinayo 2023. Waxaan ku faraxsanahay inaan aragno ku soo laabashadeeda Sharci-dejinta oo aan taageerno doorashadeeda!
Brandy Donaghy ee Wakiilka Gobolka, Degmada 44aad (Mill Creek) – votebrandydonaghy.com
In her first session, veteran and community organizer Brandy Donaghy worked to expand access to emergency care, community resilience, and apprenticeships. She also worked on paraeducator continuing education, and we are happy to endorse her re-election.
Shukri Olow ee Wakiilka Gobolka, Degmada 47aad (Kent, Auburn, Covington) – electshukri.com
Dr. Shukri Olow’s work supporting children and families, and her lived experience as a refugee, mother, and product of Kent public housing led SEIU 925 members to endorse her campaign for the open state representative seat. Olow has worked implementing the Best Starts for Kids program, and her mother’s experience as an SEIU 925 child care provider gives her a deep understanding of issues facing young families and workers. We’re proud to endorse her campaign!